Acer dia mamerina ny kahie filalaovana amin'ny Predator Triton 900 | Vaovao momba ny gadget
Acer dia mamerina ny kahie filokana miaraka amin'ny Predator Triton 900 miaraka amin'ny GeForce RT 2080
Ignatius Room | | portable
Tao anatin'izay taona lasa izay, mpanamboatra maro no nanomboka nandefa solosaina finday fitadiavana izay mitady antsika atolory anay ny fahombiazana faratampony amin'ny fitaovana azonay aleha na aiza na aiza. Ao anatin'ny isan'ireo kahie, ny convertibles dia mitantana hahazoana akany lehibe amin'ity sehatra ity ary ny porofon'izany dia hita ao amin'ny Acer Predator Triton 900 vaovao.
Ny orinasan'ny Acer dia nanolotra solosaina finday vaovao roa tantanan'ny Windows 10 natao hanomezana fividianana ambony indrindra ho an'ireo olona tia lalao video. Miresaka momba ny Predator Triton 900 isika miaraka amin'ny efijery 17-inch sy efijery 4k azo ovaina ary ny Predator Triton 500, miaraka amin'ny efijery 15-inch, famaranana metaly ary 17,9 mm ny hateviny.
Na dia mamela antsika hametraka ny fitaovana amin'ny fomba faran'izay mahafinaritra indrindra aza ny efijery azo ovaina an'ny Predator Triton 900, hankafizantsika ireo lalao ankafizinay indrindra, ny Triton 500 dia manome fitaovana madinidinika miaraka amina chassis vy mety ho an'ireo izay Mila mitondra ny fitaovany avy etsy sy eroa izy ireo.
Araka ny nolazain'ny Tale Mpitantana ny GeForce OEM ao amin'ny NVIDIA:
Faly izahay fa ny Max-Q-designed GeForce RTX 2080 GPU antsika dia manampy amin'ny famaritana indray ny traikefa filalaovana laptop. Miaraka amin'ny haitao vaovao misy ny fanarahana taratra taratra tena izy sy fahatsiarovana GDDR6 ho avy manaraka, ireo mpilalao dia afaka misafidy ny Predator Triton 900 ho toy ny sehatra filalaovana matanjaka sy manankarena.
3 Fanaraha-maso avy amin'ny finday avo lenta
4 Ny vidiny sy ny fisian'ny Acer Predator Triton vaovao
Ny Acer Predator Triton 900 dia mampiditra savily masinina amin'izany mihodina, manitatra ary mamela antsika hamoritra ny efijery 17-inch. Ity fitaovana ity dia manolotra fomba fampiasana efatra ahafahantsika mizara ny efijery naman'ny namantsika rehefa milalao isika, milalao ny efijery mikasika, mampiasa azy io ho toy ny solosaina finday nentim-paharazana na toy ny convertible hampiasa azy io ho toy ny singa famolavolana.
Ny Trackpad dia mipetraka eo akaikin'ny fitendry izay ahafahanao mametraka ny tananao amin'ny toerana voajanahary hilalao amin'ny fomba milamina kokoa ary manana hatevin'ny 23,75 milimetatra. Ho fanampin'izay, manana rafitra audio Waves Maxx izy izay manolotra kalitaon'ny feo miroboka sy traikefa audio 3D tena-misy.
Anatiny, nahita ny NVIDIA GeForce RTX 2080 GPU izahay Misaotra ny efijery 4k IPS, manolotra antsika ny traikefa filokana tsara indrindra ao an-dakilasiny miaraka amin'ny processeur Intel Core i7 andiany fahavalo avo indrindra miaraka amin'ny fitadidiana sy fitahirizana 32 GB, SSD RAID NA PCIe NVMe.
Ny maodely Predator Triton 500 dia manome antsika a Efijery IPS 15,6-inch, famirapiratana 300 nits ary tahan'ny famelomana 144 Hz miaraka amin'ny valin'ny 3 ms, milanja 2.1 kg sy 17.9 mm ny hateviny, miaraka amina chassis metaly ary bezel 6,3 mm ihany, izay manome efijery iray misy antsika izay mandrakotra 81% ny velarana. Mikasika ny fizakan-tena dia mahatratra 8 ora ny fizakantenan'ity maodely ity.
Ity modely ity dia misy amin'ny sary NVIDIA GeForce RTX 2080 miaraka amina endrika Max-Q, processeur fahavalo Intel Core i7 hatramin'ny faha-32 GB DDR4 RAM ary NVMe PCIe RAID 0. Ho fanampin'izany, mamela antsika hi-overclock mihoatra ny rafitra mpanohana ny sary. zava-misy virtoaly, mamadika ity fitaovana ity ho any amin'ny faritra rehetra azontsika atao ankafizo ny lalao ankafizinay na aiza na aiza.
Fanaraha-maso avy amin'ny finday avo lenta
Misaotra ny fampiharana PredatorSense, afaka izahay fehezo ny fitaovana Predator amin'ny finday avo lenta hanovana ny toe-javatra overclocking, hafainganam-pandehan'ny mpankafy, jiro ary maodim-peo. Ho fanampin'izany, azontsika atao ihany koa ny manahetsika ny mombamomba ireo preset samihafa amin'ny solosaina na manova azy ireo lavitra.
Ny vidiny sy ny fisian'ny Acer Predator Triton vaovao
Ny Acer Predator Triton 900 dia ho tonga any Espana amin'ny volana martsa amin'ity taona ity avy amin'ny 4.199 euro, raha ny Predator Triton kosa dia ho hita manomboka amin'ny volana febroary ary manomboka amin'ny 1.999 euro. Amin'izao fotoana izao, ny famaritana ny maodely tsirairay dia tsy misy, noho izany dia hiandry ny volana febroary sy martsa ho avy izahay mba hahatratra ny tsena hizaha ireo fanaingoana misy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » solosaina » portable » Acer dia mamerina ny kahie filokana miaraka amin'ny Predator Triton 900 miaraka amin'ny GeForce RT 2080
LG dia mandefa ny fahitalavitra OLED voalohany manerantany
Koogeek: ny vokatra ara-pahasalamana tsara indrindra amidy anao ao Amazon